China LED Fampisehoana latabatra DJ, Fampisehoana takelaka fisehoan'i LED, Fampisehoana latabatra DJ anatiny, Famatsiam-baravarana LED bar
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Fampisehoana LED LED, Fampisehoana LED, Fampisehoana DJ anatiny, Fantson-tsarimihetsika LED, LED DJ,
Home > Products > Ny efijery fampisehoana fahaiza-mitarika > Fampisehoana LED LED
Fampisehoana LED LED
Ny vokatra avy amin'ny Fampisehoana LED LED , mpanofana manokana avy any Shina, Fampisehoana LED LED , Fampisehoana LED mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Fampisehoana DJ anatiny R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
P5 LED Fampisehoana bika fandefasana LED daka
P5 LED Fampisehoana latabatra LED Pman
Fonosana: raharaha hazo / sidina
P5 LED Fampiasa bika fandefasana takelaka-tontoloo-tontoloo, ianao manjaka. Digital Butterfly LED Video Wall DJ Use dia manolotra ny fisafidianana majika lehibe amin'ny rindrin'ny horonantsary LED amin'ny mpanjifa amin'ny indostrian'ny fialamboly. Tsy ho voataona ho an'ny kalitao miaraka...
P5 LED latabatra DJ - na aiza na aiza alehanao dia ho eo foana aho. Bombolom-borona mahavariana : Manaparitaka ny loko feno habetsahan'ny LED DJ Manam-pandeha izay manintona sehatra famoronana ho an'ny mpihaino. Fandidiana tsotra : Fampisehoana LED
Shina Fampisehoana LED LED mpamatsy
Tao anatin'ny roapolo taona, ny efijery DJ nitarika dia lasa marika ambony sy mpivarotra fivarotana alina. Ny LED Screen DJ dia afaka manolotra fiantraikany faran'izay be sy mifangaro amin'ny mozika sy fahitana tonga lafatra. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana horonantsary efa notarihin'ny fahitalavitra ary nilalao manokana, afaka nilalao mandry amin'ny efijery fitarika, ary azo namboarina izany mba hahatsapa fihetseham-po hierarchical kokoa ny sehatra.
Wafer maivana manjary avo dia ampiasaina, ny fizotran'ilay vokatra manontolo dia voafehy amin'ny anti-static, ny tahan'ny fisarahana eo amin'ny mazava sy ny loko dia ambany noho ny ± 10. Ny tsara indrindra dia ny fampisehoana famaritana anatiny anatiny sy ny maha-marina ny fantsom-pandaharam-batana DJ miaraka amin'ny 4mm-5mm dia mihoatra ny 60000 isa isaky ny metatra toradroa, izay ahafahana mameno ny fepetra takian'ny famaritana avo sy fampisehoana faritra kely.
1. Toetran'ny nofinofy maro be, olo-mahay tsara tarehy, fanompoana manokana.
2. ampiharina amin'ny doka, fanabeazana, fanatanjahantena, fampirantiana, kianja, fanjakana tena izy, manao sns
3. Mba hamorona H no ghlight kolontsaina tsirairay, tanàna hanatsara sary, tanàna hahazo fari, hahatakatra hanasongadinana zava-dehibe ara-barotra
Fampisehoana DJ anatiny
Fampisehoana LED HD